★မြန်မာ့အလင်း★: မလည်ရှုပ် ဦးအောင်သိန်းလင်း မွှေးတဲ့မီး
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်းက တောင်ဥက္ကလာပက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဆီက မဲလိုချင်တော့ ၇ ရပ်ကွက်မှာ မြန်မာတွေကန့်ကွက်လို့ ရပ်ထားရတဲ့ ဗလီကို ပြန်ဆောက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်း ပါတီဝင်အင်အား ၂၀၀၀ ပေးလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာတွေ အကုန်လုံးက ထကန့်ကွက်ရော။ ဆွမ်းလောင်းအသင်းတွေ၊ ရယကတွေနဲ့ တောင်ဥက္ကလာ မြို့ခံတွေက အထူးအစည်းအဝေးလုပ်ပြီး မြို့တော်ဝန်ကို မကျေနပ်ကြောင်းပြောတော့ ချက်ချင်းရပ်ဖို့ အောင်သိန်းလင်းက အမိန့်ထုတ်တယ်။ အဲဒီတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက မကျေနပ်ပြန်ဘူး။
သူတို့က ကြံ့ဖွံ့အတွက် လုပ်ပေးလိုက်ရပြီးတော့ ဗလီက ဆောက်ခွင့်မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့အကုန်လုံးက ပါတီဝင်တွေ၊ အမာခံမဲပေးမယ့်သူတွေ ဖြစ်ကုန်ရပြီလေ။ အဲဒီတော့ တိုင်တဲ့ မြန်မာတွေကို မကျေနပ်ဘူး။ အဲဒီတော့ နှစ်ဘက်က ချတော့မယ်ပုံဖြစ်နေတယ်။ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက ဗလီနားမှာ တုတ်တွေ၊ အုတ်ခဲတွေပုံထားတယ်။ သူတို့ကလည်း ပြောတယ်။ သူတို့ ဒီဗလီဆောက်ဖို့ ပါတီဝင်တွေ၊ မဲတွေပေးလိုက်ရပြီ၊ မြန်မာတွေကလည်း ဗလီဆက်ဆောက်ရင် ပြဿနာရှာမယ်။ အဲဒါ ကွိုင်တက်နေတယ်။ လောလောဆယ်တော့ စည်ပင်က အရေးပေါ်အမိန့်နဲ့ ရပ်ခိုင်းထားတယ်။ ဆက်ဆောက်ရင် ဖမ်းမယ်လို့ပြောတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ကို ပြန်ရုတ်သိမ်းလိုက်တယ်။
ဦးအောင်သိန်းလင်း ပေါက်ကရလုပ်တာ အရေးအခင်းအထိ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ကြည့်ရတာ အဲဒီပြဿနာက မသေးဘူး။ မြို့ထဲက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကလည်း တောက်တခေါက် ခေါက်နဲ့။ ဗလီနားကို လာတဲ့လူတွေ ရိုက်မယ့်ပုံပဲ။ မြန်မာတွေကလည်း ရိုက်မယ် တကဲကဲပဲ။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို တောင်ဥက္ကလာက ရွေ့သွားအောင်လုပ်မယ်တဲ့။ အဲဒါ အလားအလာမကောင်းဘူး။
အဲဒါ တောင်ဥက္ကလာက ကြံ့ဖွံ့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အမတ်လောင်း ဒေါက်တာ စောနိုင်ကလည်း အခြေအနေကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းလုပ်ဖို့ လိုက်ပြောတယ်။ အခြေအနေကို စိုးရိမ်ရတယ်လို့ ပြောတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက မြန်မာတွေ ကန့်ကွက်လို့ သူတို့ ဗလီမဆောက်ရတာဆိုပြီး ငိုတဲ့သူက ငိုတယ်။ အဲဒီသတင်းက တောင်ဥက္ကလာမှာတော့ သတင်းကြီးပဲ။
(မှတ်ချက်။ ။ ယခုဆောင်းကို ဒီနေရာမှ ယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သတိတော့ပေးချင်ပါတယ် . . ကုလားကို မုံန်းနေပြီး ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးမှ လက်ပိုက်ကြည့်သည့် မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်သည် တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ အုတ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်လုပ်မှ ထို မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်သည် တန်ဖိုးရှိပါတယ် )
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 4:26 AM
ပြည်တွင်းမှာ နအဖ ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတာ ကုလားတွေပါ။ ပြည်ပမှာကျတော့ ကုလားတွေက ဒီမိုတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်နေကြပါတယ်။ မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို နအဖ မသင့်မြတ်ဖြစ်နေတာကို ကုလားတွေက နိုင်ငံရေး နေရာရအောင် အကောက်ကြံနေတာကို သတိထားကြပါ။ ပွဲလန့်တုံး ဖျာခင်းနေကြပါတယ်။ ကုလား မြအေးက ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုပြီး ကုလားတွေအကူအညီနဲ့ လိမ်ညာနေတယ်။ အဲဒီကုလားလိမ်ရဲ့ သမီး ကုလားမက ၅ မိနစ် မိန့်ခွန်းပြောတာနဲ့ နှစ် ၂၀ လုပ်နေတဲ့ သူတွေထက်သာလွန်တယ်ဆိုပြီး ချီးကျူး နေကြတယ်။ ဒီမိုတွေကလည်း အရမ်းကိုတုံးလွန်းပါတယ်။
အမှန်တကယ်နအဖကို ဆန့်ကျင်လိုသူတွေဆိုရင် မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေလို ငါ့လူ သူ့လူမခွဲခြားပဲ နအဖနဲ့ လက်တွဲသူမှန်သမျှ ဆန့်ကျင်ရမှာပါ။ မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေဆိုရင် DKBA ကို နအဖ နဲ့ ပေါင်းသင်းရမလားဆိုပြီး ရစရာမရှိအောင်ဆဲဆိုနေတာ မြင်နေရပါတယ်။ ( ကျုပ်ကတော့ မြန်မာလူမျိုး ကရင်တွေရဲ့ ဖြောင့်မတ်မှုကို အရမ်းလေးစားတယ်။ ) ဒါပေမယ့် ဒီမိုဘက်က ကုလားတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာ နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေကို လုံးဝမရှုံ့ချကြပါဘူး။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက ကုလားတွေက ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာလဲ မလုပ်ဘူး။ ဒီမိုကုလားတွေက နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းနေတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကိုပဲ ရှုံ့ချနေတဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ မရိုးသားပါဘူး။ တကယ်တော့ ကုလားဦးရေဟာ မြန်မာပြည်မှာ မနည်းပါဘူး။ ဒီမိုမီဒီယာတွေက နအဖရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံ ကူညီနေတဲ့ ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ သတင်းကို ဘာကြောင့် ထိမ်ချန်ထားကြတာလဲ? မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်ခွဲပြီး ကလေးလိုရန်ဖြစ်နေတာကို ကုလားတွေက အခွင့်အရေးယူပြီး နိုင်ငံရေးနေရာရအောင် လုပ်နေပါတယ်။ ဒီကောင်တွေနေရာရရင် မွတ်ဆလင်နိုင်ငံလုပ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားရေးသတိရှိကြပါ။
ကုလားကို စကားလုံးလေးနဲ့ ဝေဖန်တာလေးကို ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်တဲ့ မြန်မာတွေ . . . မြန်မာလူမျိုး နအဖကို အတင်းအဖျင်းပြောမှ စားဝင်အိပ်ပျော်တဲ့ ဒီမိုသမားတွေ . . .စစ်သားရဲ့ သိက္ခာကို မထောက်ပဲ မြန်မာလူမျိုး ဒီမိုသမားတွေကို အတင်းပဲပြောနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေကို မေးချင်ပါတယ်။ ဦးလွမ်းဆွေ ဘလော့မှာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်း ရေးထားတာကို ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီလား?
မြန်မာအချင်းချင်း ဒီမို/နအဖ တံဆိပ်တွေကြည့်ပြီး အမုန်းအဃာတတွေကြီးနေတာ မှန်ကန်တဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓါတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ မြန်မာအချင်းချင်း အတင်း . . အဖျင်းတွေပြောမှ နိုင်ငံရေးလို့ သဘောထားနေတာလဲ မှားယွင်းတဲ့ အမြင်ပါပဲ။ သွေးမတော် သားမစပ်တဲ့ အဖြူ နဲ့ ကုလားတွေကို ဝေဖန်ရင် ဆတ်ဆတ်ထိမခံဖြစ်ပြီး. . ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ဒုက္ခရောက်ရင် မသိဟန်ဆောင်နေတဲ့ အပြုအမူဟာ အရမ်းကို ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ မျိုးချစ်စိတ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်း နေရာတကာ ဥပက္ခာပြုပြီး ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတာ မှားယွင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် ဘာမှမလုပ်ပဲ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သူမှာရှိတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဟာ တန်ဖိုးလုံးဝမရှိပါဘူး။ ကရင်၊ ဗမာ ၊ ရှမ်း ၊ ပအို့ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေမကြည့်ပဲ မြန်မာအချင်းချင်းဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ်နဲ့ … အဲဒီအလုပ်သမားတွေကို ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲ.. ဘယ်လို ငွေကြးထောက်ပံ့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားအဖြေရှာပေးကြပါဦး။ သံရုံးနဲ့ .. နအဖ ထိပ်ပိုင်းကို ပြောကြားနိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိသူများကလည်း .. အစိုးရအချင်းချင်း ၀င်ရောက်ပြောကြားအောင် နားချပေးကြပါ။ မိမိက ဘာမှ မစွမ်းဘူးဆိုလဲ လက်ပိုက်ကြည့်မနေပဲ . . . အနည်းဆုံးတော့ နှုတ်နဲ့ ဆောင်မပေးကြပါ။ ရေနစ်တဲ့သူတွေကတော့ မြက်တစ်ပင်တောင် အားကိုး လိုကြပါတယ်။
☀ ခွန်ကယ် စက်ရုံအလုပ်သမားများ စားစရာမရှိ၍ ငါးရှာဖားရှာ ထွက်နေရ . . . ယခုညဉ့်နက်ပိုင်းတွင် သေနတ်သမား (၂) ဦး လာရောက် ပစ်ခတ်နေ
တောင်ဥက္ကလာသား ကြံ့ဖွတ် အောင်သိန်းလင်း(ယခု နအဖ ခန့်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်)ဟာ တောင်ဥက္ကလာမှာ ချီးနယ်နေတာ ကြာပြီလို့ ..မြို့ ကို ဖုန်းဆက်တိုင်း ကြားရတယ်။
အောင်သိန်းလင်းတို့ဟာ သူ့ ငယ်သူငယ်ချင်း ကျောင်းနေဖက် အသက်၆၀ ၀န်းကျင်ရှိသူတွေနေတဲ့ အိမ်တွေအထိ သွားပြီး ကြံ့ဖွတ်ဝင်ပြီး မဲထည့်ဖို့ စည်းရုံးနေကြတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ အားလုံးက “နိုး“ လို့ ငြင်းလိုက်ကြတယ်။---
ဒါနဲ့ အောင်သိန်းလင်းက ၇ ရပ်ကွက်ထဲက ဗလီတက်သူတွေကို စည်းရုံးရေးဆင်းလိုက်တာ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းထိ ဆိုးကျိုးဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။----
ပြည်တွင်းက ဘာသာစုံကိုးကွယ်တဲ့ ပြည်သူတို့-။
နအဖအလိုတော်ရိ= ကြံ့ဖွတ်ကို မဲပေးနိုင်ကြပါဦးမလား။
ကြံ့ဖွံ့ကို မဲမပေးကြနဲ့။ကြံ့ဖွံ့ဝင်ထားရင် ပြန်နုတ်ထွက်ကြ။
ကြံ့ဖွတ်ဟာ လူမျိုးစုံ ဘာသာစုံတို့ရဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်တယ်။
ကြံ့ဖွတ်ကို ဘုံရန်သူအဖြစ် အားလုံးက သတ်မှတ်ချေမှုန်းကြ။
နအဖကို ဖြိုချင်ရင် ကြံ့ဖွံ့ဒေါက်တိုင်ကို ဖြိုလှဲလိုက်ကြပါစို့။
မြင့်မြတ်သည့် မြန်မာ့မြေမှာ ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒမရှိစေရ
ဘာပဲပြောပြော မူဆလိမ်မ မဝေနှင်းပွင့်သုန် ကို လိုးချင်နေမိတာတော့ အမှန်ပဲ ။ ဖင်ထောင်ပြီးလိုးလိုက်လို့ ကတော့ အနှစ်တွေချည်းပဲ ။အီဆိမ့်နေမှာ ။ပလွေပါ မှုတ်ပေးရင် အတိုင်းထက်အလွန်......
ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တိုင်းပြည် သစ္စာဖေါက် စာရင်းသွင်းခံရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သားသမီးတွေလည်း အနောက်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာ နေခွင့်မရအောင် လုပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် အနုပညာရှင်တွေလည်း ဗီဇာ ပိတ်ခံခဲ့ရပြီ။ သခင်ကရင်တွေကလည်း DKBA ကို နအဖနဲ့ ပေါင်းသင်းတဲ့အတွက်. . သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဆဲဆိုပြီး နှိပ်ကွပ်နေတာ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆပြီး . . . ထောက်လဲ ထောက်ခံတယ်။
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ကျောသား ရင်သား ခွဲခြားတာတွေ မလုပ်သင့်ဘူး။ မေးချင်တာက နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ဘယ်တော့ အနောက်နိုင်ငံကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာ သိချင်တယ်။ နအဖ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံနေတဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီစာရွက်မှာ ရှေနေကုလား သန်းတင်က ပလီတွေဆောက်ခွင့်နဲ့ အခွင့်ထူးတွေပေးရင် . . နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံဖို့ ဗြောင်ကြီးကို စည်းရုံးထားတယ်။ ပလီဆောက်ခွင့်ရရင် ကလိမ်ကကျစ်ကျတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံကြပါလို့ စည်းရုံး ပြောဆိုချက်ဟာ လူကျင့်ဝတ်နဲ့လုံးဝကို မကိုက်ညီပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက. .. အိမ်ရှင်မြန်မာတွေကို စစ်ကျွန်ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့ ကိစ္စဟာ ဘယ်လောက်အထိ ကောက်ကျစ်လဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
တောင်ဥက္ကလာပ မှာလဲ ပလီဆောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် နအဖနဲ့ အပေးအယူလုပ်ခဲ့လို့ အခုဆိုရင် ပြဿနာတက်နေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလဲ မွတ်ဆလင်တွေဟာ နအဖရဲ့ မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို အဓိက ကူညီနေကြပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ကြီးဆိုးနိုင်ရေး အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံပါဆိုပြီး မရှက်မကြောက် ပြောနေကြပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဦးခင်မောင်ဆွေလို တိုင်းပြည်အတွက် ထောင်ထဲမှာ နေလာခဲ့သူကို နအဖ ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံတဲ့အတွက် နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောဆိုကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့ဆီမှာ ခိုကပ်နေတဲ့ ကုလားတွေက အားကျိုးမာန်တက် နအဖ ရွေးကောက်ပွဲ ထောက်ခံနေတာကို ခင်ဗျားတို့က ဘာလို့ ပါးစပ်တွေ ပိတ်နေတာလဲ? ဒီမိုဘက်တော်သားပါလို့ ပြောနေတဲ့ ကုလားတွေကလည်း ကုလားအချင်းချင်းဆိုတော့ မသိဟန်ဆောင်နေပြီ။
မြန်မာတွေကိုပဲ အရေးယူတယ်.. ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်နေပြီး ကုလားကို ဘာမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျုပ်တို့ မြန်မာမျိုးချစ်တွေက ဘယ်လို မြင်လာမလဲဆိုတာ နည်းနည်းတော့စဉ်းစားပါ။ ဖြောင့်မတ်တဲ့ စိတ်ထားခင်ဗျားတို့မှာ မရှိရင် အားပေးထောက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းသွားလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ လက်ခံရင်.. ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံရေးမှာ ပတ်သက်နေတာကို ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ။ ထပ်မေးချင်ပါတယ်. . . ဘယ်တော့ နအဖ လက်ကိုင်ဒုတ် ပလီဆရာတွေနဲ့ မွတ်ဆလင် အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အနောက်ဖက်ကနေ နှင်ထုတ်ဖို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်မလဲဆိုတာ ဖြေပေးကြပါ။
October 20, 2010 at 5:12 AM
ကိုဇော်မျိုးပြောတာ လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို သက်ဆုံးရှည်စေမဲ့ မည်သည့်ထောက်ခံမှု့ မျိုးကိုမဆို ရှုပ်ချ ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒီပြည်တွင်းက မွတ်စလင်တွေ စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံနေတာကို ဘာ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီကို လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ပက မွတ်စလင်တွေက ဘာ့ကြောင့်လေသံမဟပါသလဲ။ လုံးဝကို ရှုပ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ သူတို့ က စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီးရှုပ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ အမှန်တရားကို ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသူများ၊ အမှန်တရားကို လိုလားတဲ့သူတွေဟာ ပြည်တွင်းက မွတ်စလင် တွေ ကိုရှုပ်ချရမှာဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်နှုတ်ဆိတ်နေကြပါသလဲ???????????????
နင်ကငါ.၇ဲ.စကားလုံးတွေကိုခိုးသုံး၇ုံတင်မကဘူး အခုငါ.နာမည်ကိုတောင်ခိုးသုံးတယ်ပေါ. နင်အဆင်.ကလမ်းဘေးက ထမိန်စုတ်ခိုးတဲ. သူခိုးလောက်တောင်အဆင်.မ၇ှိဘူး နင်ေ၇းထားတာက
( ဦးသန်းရွှေဟာ မိုဟာမက်လို ကြာကူလီလည်း မဟုတ်သလို. .မုဒိမ်းကောင်လဲမဟုတ်ဘူး။ ဦးသန်းရွှေနဲ့ မိုဟာမက်ဆိုတာ နံ့သာနဲ့ချေးလိုကွာတယ်ကွ။)
ဆိုတော. နင်ကသန်းေ၇ွှကို ကိုးကွယ်တာကိုး အစကနင်ဘာသာမှန်းမသိဘူး သံယာတော်တွေကိုလဲခေါင်း၇ိုက်ခွဲ၇ဲတယ် ကုလားတွေလဲမကောင်းဘုးပြောတယ်ဆိုတော. အခုတော. နင်.ဘာသာကိုကိုးကွယ် တယ်ဆိုတာကို သိတော.တယ် နင်ကိုးကွယ်တာ မိ၇ိုးဖလာ သန်းေ၇ွှ ဘာသာပေါ.ဟုတ်လား ငါတို.အုပ်စုက မိန်းမတွေဆိုပေမဲ.သတ္တိ၇ှိတယ် မှန်တာပဲပြောတယ် ကိုယ်ပြောတာကိုလဲ ကိုယ်ခံ၇ဲတယ် နင်လိုသွေးကြောင်တဲ.ကောင်မဟုတ်ဘူး နင်လိုယူတ်ညံတဲ.စိတ်ဓာတ် ငါတု.ိမှာမ၇ှိဘူး
အကြောင်းသိ မြန်မာပြည်မှ မျိုးချစ်မျိုးစစ် လူငယ်တစု